Gorbachev: USA & Russiya waa in ay dib u-heshiin ka shaqeeyaan – Kasmo Newspaper
Gorbachev: USA & Russiya waa in ay dib u-heshiin ka shaqeeyaan
Updated - August 12, 2017 11:17 am GMT
London (Kasmo), Madaxweynihii hore ee Midowgii Sofiyeeti, Mikhail Gorbachev ayaa ku dhiirrigaliyay Moskow iyo Washington, in ay bilaabaan wada-shaqayn iyo tanaasul, inta taladu ayan faraha ba bixin.
“Haddii xilligii dagaalkii qaboobaa an ku guulaystay in reer Galbeedka aynu is af garanno, xiisadda oo dagaal Nuclear ah qarka u saarnayd, iima muuqato sabab an xitaa maanta u raadin weyno dariiqii wadahadalka”.
Ereyadaas waxaa ku hadlaya waa Xoghayihii Guud ee u dambeeyay Golihii Dhexe ee Xisbigii Shuuciga, Hoggaamiyihii u dambeeyay Sofiyeetiga, Mikhail Gorbachev, oo siiyay waraysi wargayska Anadolu.
Gorbachev ayaa ka hadlay kulankii isaga iyo Reagan ku dhexmaray Geneva, 40 sano oo dagaalkii qaboobaa lagu soo jiray ka dib in uu ahaa buuq iyo faraha oo midba midka kale ku fiiqayo.
Wuxuuse sheegay in uu gartay in Dunidu qarka u saarnayd dagaal Nuclear ah, suuragalna ayan ahayn in lagu sii socdo dariiqaas, oo haddii dagaal qarxado, hubka 2da dhan haysteen gubi lahaa dunida oo idil.
“Wixii ka dambeeyay saxiixii 2dii heshiis ee dhimista hubka, wadahadal dheer ka dib, wax badan ayaa iska baddelay damiirka malaayiin dad ah, waana wakhtigaas markii aynu xiriirka 2da dal gaarsiinnay heer cusub” ayuu ku daray.
“Talada an u jeedinayo ragga hoggaanka haya maanta waa in ayan baygagin, salfudaydna ku kicin, iyada oo midba midka kale ka nixinayo. Waa in dariiqii wadahadalka la qaado, si habboonna loo xisaabtamo, inta talada ayan faraha ka bixin” ayuu ku soo xiray.